Dr. Baadiyoow oo ku daba feelan musharax uu isaga ka fursad wanaagsan yahay - Caasimada Online
Home Warar Dr. Baadiyoow oo ku daba feelan musharax uu isaga ka fursad wanaagsan...
Dr. Baadiyoow oo ku daba feelan musharax uu isaga ka fursad wanaagsan yahay
Muqdisho (Caasimada Online) – Ololaha doorashada xilka Madaxweynenimo ee Soomaaliya oo si weyn ugu socda magaalada Muqdisho ayaa murashaxiinta waxay bilaabeen in ay sameystaan isbaheysiyo iyo gaashaanbuursi.
Murashaxiinta isku xiran ee gaashaanbuursiga noqday ayaa isugu jira kuwo xilal kasoo qabtay dowladdii Soomaaliya iyo siyaasiyiin fashilan oo siyaasaddahooda cuuryaan noqotay.
C/raxmaan Macalin Baadiyoow oo doorashadii 2012-kii ka qeybgalay, cododna ka helay xildhibaanada ayaa sanadkaan u muuqan inuu yahay murashax. wuxuuna taas badalkeeda ku dhex milmay murashaxiin marka la fiiriyo uu isaga ka fursad fiican yahay, kuwaasi oo laga yaabo in ayba ku haraan is diiwaan gelinta.
Cabdiraxmaan Macallin Baadiyow
C/raxmaan Baadiyoow ayaa daba taagan mar walbo Ra’iisul wasaarihii hore ee xukumaddii kalsoonida kala noqotay baarlamaanka, Cabdiweli Sheekh Axmed, kaasoo ka mid ah murashaxiinta wax ku raadinaaya mucaaradnimada dowladda hadda jirta.
Sida ay aaminsan yihiin taageerayaasha iyo dadka kale in C/raxmaan Baadiyoow uu ka fursad wanaagsan yahay rajada madaxweyne haddii uu is sharxo, murashaxa uu ku daba-feylsan yahay.
Sidoo kale, warar house oo Caasimada Online heleyso ayaa sheegaya in C/raxmaan Baadiyoow iyo C/weli Sh. Axmed dhex maray heshiis ah in marka uu guuleysto Yuulka in C/raxmaan Baadiyoow uu noqon doono Ra’iisul wasaare, hase ahaatee ay adkaan doonto sida uu C/weli ku helo codka kooramka looga baahan yahay Madaxweynaha.